Ha Collaysan Cidna, La Saaxiibi doontaana Mooyiye. WQ- Maxamed Aadan Tarabbi | Haqabtire News
Ha Collaysan Cidna, La Saaxiibi doontaana Mooyiye. WQ- Maxamed Aadan Tarabbi
1994-1997-dii fikir ka siyaasiga ah ee ee siyaasiyiinta Soomaalilaan garaad ahaan wuxuu ahaa mid ku dhisan muxaafid markaa xil haya iyo mucaarid ay calan ka u sidaan calan castii. ( Koox siyaasiyiina oo ka mid ahaa SNM) muxaafid ka xil ka haya marka xilka la ga qaado wuxuu toos isaga xaadirin jiray goobihii calan casta iyo marfashyadoodii faaqidaadda siyaasadda. Shaqsigaa xil ka la ga qaaday wuxuu canbaarayn iyo canaan joogto ah faraqa ugu xidhi jiray xukuumaddii waqtigaa ee marxuum Cigaal. Jaraa’iddada markaas caan ka ah waxaa ka mid ahaa Xorriyo, Codka, iyo Jamhuuriya, marka aannu ku soconno dugsigayagii Sheekh Madar (Xuseen Giirre) ayaannu hore ka sii iibsan jirnay Xorriyo ama Codka waxa aannu la anfariiri jirnay hanjabadda calan casta oo dabcan aannu taageerayaal u ahayn, annagoo u arkaynay in xukun ka iyaga kaligood la gu sooro.!
1997-dii shirwaynihii beelaha Soomaalilaan waxa tartamay siyaasiyiin aanay ka dhaxaynin xidhiidh sokeeye iyo wadahadal toonna, waxa kaliya ee u dhaxaeeyey wuxuu ahaa hadallada ay isaga ganaan saxaafadda. Haddii aynu isku tolno labadaas xilli ee 1994-1997-kii aragtidii siyaasiyiinta may sababin colaad laakiin waxaynu aragnay kala fogaanshaha maanta iyo dib u midawga barri oo soo dhakhsada. Halkaas waxaa inooga muuqata siyaasiyiintu makala fogaato fikir ahaan iyo xidhiidh ahaanba laakiin waxay kala fogeeyaan oo la kala ilaaliyaan waa dadwaynaha.
Bal waxaad sawirataa Kornayl soo dagaalamay oo mujaahid ah reerkii sii iyo dagmadiisiina taageero ka haysta oo u hanjabaya xukuumad kuna tiraabaya hadallada ugu adag ee mucaaradnimo. Dareen ka shacab ka iyo saamaynta erayadaas ayaa u baahan in hoos loo eego. Xagga kale ee xukuumadda oo iska caabbin iyo jawaab degdeg ah u haysa calan casta iyo salaadiintooda mucaarad ka ah. Waxaase u baahan inaad fahanto inaanya jirin colaad u dhaxaysa labadooda iyo nacaybtoonna laakiin laysku haysto adiga haa adiga.
Dhammaad kii 2001-dii iyo horraantii 2002-dii waxa is urursaday wasiiraddii ugu tunka waynaa dawladdii Cigaal ee uu xilka ka qaaday qaarna isaga tageen, waxay la baxeen urur kii SAHAN, oo la gu naanaysi jiray (Cadho ururtay) halkaas waxa ku midoobay laba aragtiyood oo aad kala fogaa, mucaarad fog oo durugsan iyo muxaafid dhexdhexaad iyo kuwo durugsan ba leh. Halkaas waa sawir kale oo kuu muujinaya in dad ka maanta kala fikir ka ahi ay markale isku koox noqon karaan, oo ay isku xisbi noqon karaan, markaa maxaa kula gudboon cidna ha collaysan, barriba waa la isu imani.
2003-2010-kii siyaasaddii abid ugu adkayd ee mucaaradnimo ayaa Soomaalilaan soomartay xilligaas oo marar badan shaki dhinaca nabadda ahi uu yimi, haddana siyaasiyiintu may ahayn kuwo ay colaadi ka dhaxayso dhexdooda, balse dhinaca dad waynaha ayaa ahaa kuwo aad u kala durkay oo ku asqoobay hadalladii saxaafadda. Tusaalaha ugu wayn ee ina horyaalla waa UDUB iyo colaaddii fikir ka ahayd ee dhalinyarada loo galiyey iyo sida isla kii isla qof kii dib xil inta loogu dhiibay waliba la yidhi: Markii aan arkay hufnaantiisa, kartidiisa, waxaan u magacaabay jagadaas. Isbadal ka intaas leegi siyaasiyinta uu ka suuroobaa laakiin dadwaynaha ka ma suuroobo. Ma jirto colaadi ee ha galin taayir socda, ha na collaysan saaxiib kaa, barriba waa midoobi kartaane.
Waxaan xasuustaa Ferb,2004-kii ayaan xaflad dhalinyaradii UFO la gu xusayey ka ga qayb galay Huteel kii Mingsing ee magaalada Hargeysa waxa barxadda hore ee huteel ka ku sheekaysanayey Maxamed Kaahin Axmed iyo Wasiir kii arrimaha Gudaha ee xilligaas Ismaaciil Aadan Cismaan (Ismaaciil yare) ka dhalinyaro ahaan waxay nagu ahayd wax naadir ah waayo dagaal ka saxaafadda ayaannu aad u la soconnaa, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaanay jirin colaadi laakiin laysku hayo fikir guulaysan kara ama guul darrasan ka.